၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာလူနာများတွင် ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးကို အသုံးပြုခြင်း - Together
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးသည် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးအမျိုးအစားတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များကြီးထွားနေမှုကို နှေးကွေး သို့ ရပ်တန့် သွားစေသည့် အာနိသင်ရှိသည်။ ၎င်းကို များသောအားဖြင့် အခြားဆေးများဖြင့် ပေါင်းစပ်၍ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးကြောင့် ပြင်းထန်သည့်နှလုံးရောဂါများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါပြဿနာများမှာ ဆေးကုသနေစဉ် သို့ လပေါင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည်အထိ ဖြစ်နေနိုင်သည်။ အကယ်၍လူနာများအနေဖြင့် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှလုံးစည်းချက်ပုံမမှန်ခြင်း၊ (ဥပမာ အလွန်မြန် သို့ အလွန်နှေး)၊ လက်များ သို့ ခြေထောက်များရောင်ရမ်းခြင်း၊ မောခြင်း၊ ရုတ်တရတ်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း၊ မောပန်းခြင်း သို့ အားနည်းခြင်း စသည့်လက္ခဏာများတွေ့ရပါက ကုသပေးသည့်အဖွဲ့ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ။ ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးပေးရာတွင် လူနာ၏နှလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေခြင်းရှိ/မရှိသိစေရန် ဆေးကုသမှုမတိုင်မီနှင့် ကုသနေစဉ်တွင် ကုသပေးသည့်အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
လူနာများသည် သွေးဥအရေအတွက်ကို စစ်ကြည့်ရန်၊ အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်အတွက် သွေးကို ပုံမှန်ဖောက်ထုတ်နေရမည်ဖြစ်သည်။ ဤဆေးကြောင့် နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ထိုကြောင့် နှလုံးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေမည် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေး သွေးပြန်ကြောပြင်ပသို့ စိမ့်ထွက်သွားပါက အနီးနားရှိတစ်ရှူးများကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်သည်။ လူနာများ အကြောဆေးသွင်းထားသည့်နေရာရှိ အရေပြားတွင် နီမြန်းခြင်းနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးနေခြင်းတို့ ရှိနေနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဆေးသွင်းနေစဉ် အပူလောင်သလိုမျိုးခံစားနေရပါက စောင့်ရှောက်ကုသပေးနေသည့်သူ တစ်ဦးဦးကို အသိပေးပါ။
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက ဘာတွေလဲ။
ဆီးအရောင် အနီရောင် သို့ လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်နေခြင်း
သွေးဥဆဲလ် အရေအတွက်လျော့နည်းခြင်း၊ များသောအားဖြင့် ၇-၁၄ အကြာတွင် တွေ့ရတတ်သည်။ (ထိုအခါ အလွယ်တကူ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း နှင့်/သို့ နုံးခွေခြင်း စသည့်တို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်။)
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးသောက်သူတိုင်း အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တွေ့ကြုံရမည် မဟုတ်ပါ။ အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စာလုံးမည်းနှင့်ပြထားသည်။ သို့သော် အခြားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်သည်။ မသင်္ကာစရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးစပ်သူအား အသိပေးပါ။
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေး၏ နောက်ကျမှဖြစ်တတ်သောဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ?
အချို့သောလူနာများတွင် ကုထုံးပြီးဆုံးပြီး လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင်အောင် ရေရှည် သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။ ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေး၏ နောက်ကျမှဖြစ်တတ်သောဆိုးကျိုးများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ကြသည်။
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အခြားဘာတွေ ကျွန်ုပ်သိထားသင့်သလဲ?
ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးကြောင့် နှလုံးထိခိုက်ပျက်ဆီးနိုင်သည်။ လူနာများတွင် နှလုံးလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှုနှင့် နှလုံးရောဂါလက္ခဏာများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့် နေသင့်သည်။ ဆေးကုသနေစဉ် သို့ ဆေးကုသပြီးနောက်ပိုင်း မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို နှလုံးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
အကယ်၍ ဒေါ်နိုရူဘင်ဆင်ဆေးကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသပြီးနောက်ပေးထားပါက ဓာတ်ရောင်ခြည် ထိထားသောနေရာရှိအရေပြားမှာ ပြန်လည်နီမြန်းလာနိုင်ပါသည်။